China Industry News Factory - Cheap Industry News nokutengesa, ekisipota
Post nguva: 04-20-2018
This Koowheel Electric nokuzvidzora vakadengezera sikuta E1 ndiyo chiedza asi akasimba, bvumidzwa Innovative mufashoni inotonhorera design, akatungamirira vanoratidza chidzitiro zvachose anoratidza bhatiri uye nokukurumidza, Super kuvhunduka Absorção de Água pamwe 8inch rabha pneumatic tai. Kunze, akapeta uye kutakura nyore. Zvisinei, izvozvo zvinogona kupa identi ...Read more »
Post nguva: 03-21-2018
Pane vaiva nokuriita kuti aiva nezvinetso bhatiri maitiro uye yomukati purangazve vanenge vanogumurwa. The bhodhi iri dzakagadzirirwa naye vanoteerera kugozha sensors kuti kwose kwamave kuizunguza uremu wako. Kana pavakakwira Swagtron, wa1 danho rutsoka panguva shure. Kana zvichiitika kuvimba sq ...Read more »
Post nguva: 03-15-2018
Kana chikuru mienzaniso yakaonekwa pa pamisika, vakanga vachifunga kungotaurwa kushandiswa sezvo chizvarwa chokufambisa, ari mukuru kana iwe waida kuenda kumba kweshamwari, kusekondari, kana imwewo pakufamba kuenda kwaaishanda. Izvi anokurumidza yemagetsi skateboard kunouya ane rwemberi Disc akamedura, hombe pneumati ...Read more »
Post nguva: 03-09-2018
mubvunzo chii chinofanira kufungwa? Chokwadi chacho Safety. Saka, isu Koowheel dzemagetsi Skateboards nokutengesa vakawana CE, RoHS, FCC UN38.3 zvitupa. Sezvinoita motokari kana bhasikoro, Skateboards izvi yemagetsi anowedzera vanofanira kuva zvakanaka-vakaramba vaine chinangwa kumhanya muchechetere. Kana zvimwe ...Read more »
Post nguva: 03-07-2018
Maererano kuvaka pamusoro skateboard, muve kufungisisa zvimwe inobudisawo ayo kukura. Kana uchida pfungwa wemagetsi skateboard, asi iwe rudo rwenyu chipo setup, unofanira kutora Kutarira the: chikuru modular yemagetsi powertrain. Mune aifamba nyika kukurumidza akafanana needu, ...Read more »
Kutenga Quality Good uye Cool Electric Skateboard
Post nguva: 03-02-2018
The bhatiri zvakazara mirairo mumaawa anenge 2-3, kuvimba sei zvikuru nayo vakapedzwa. Unogona vhara kana kuvhura ruoko rwenyu zvakawanda sezvo uchida, pasina kunetseka kwayo kuwa kana ichibhururuka kure. Asi, kwete chete kubva "yepamusoro" masero akawanda aiva kukwanisa kuti akanga pedyo yavose sezvavakatarirwa capacit ...Read more »
Ndekupi kwamunoda kuenda vakafamba chitubu ichi?
Post nguva: 02-28-2018
Spring ari kuuya, ungada kuenda parwendo chero nguva? Kana uchida kuenda uye kuongorora nyika yakasiyana? Unoda zvipe kana mhuri anoyevedza uye akakwana yezororo? Kana mhinduro iri hongu, ndapota sarudza kuine zuva kubuda, zvino imi kuchashamisa chisingatarisirwi girl pakupedzisira ...Read more »
Post nguva: 02-23-2018
Chiri kupinda kusvika padanho zvinoda vamwe chakakomba utsanzi kumira kunze mukati yemagetsi skateboard nzvimbo; nzira yakafanana rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking uye nemavhiri Motors. The kuzvidzora Wireless kure zvaigona afunga zvishoma ane simba pamwero sezvo zviri zvakaitwa hutera epurasitiki uye anonzwa zvakarurama Che ...Read more »
Post nguva: 02-06-2018
Kazhinji, nokuda pakukura uye kurema Skateboards vakatakura navo inyaya. kunyanya Our Germany anotsanangura mudonzvo vakanga vagara kuziva "Electro-mufambo", inova enyika inonetsa muGermany uye zvechokwadi zvose munyika dzose kuburikidza Europe. Tinopa chikuru-notch mutengi kubatsira ...Read more »
Post nguva: 01-25-2018
Tinoratidzawo akafunga-anenge imwe yenzira kuramba zvinoshanda makakatanwa ari cheni tikachirega. Havasi vose hoverboard asi bedzi izvi Electric hoverboards izvo zvakakodzera certifications pakasimba kushandisa - ichi zvinosanganisira zvose soro 10 yakanakisisa hoverboards pasi apa. Vari zvakadaro kuva of ...Read more »
Unofanira kuziva vasati kunotenga imwe Hoverboard
Post nguva: 01-19-2018
With yepamusorosoro rwokuzvipira BALANCInG unyanzvi, kaviri Kutsiga pamwe kuvakwa-mu gyroscope nerukudzo Switch, zvikuru nyore waidzora, chete kuchinja yenyu nomuviri uremu mwoyo, sikuta wako achaita flexibly uchatamisa mberi, shure, kuruboshwe, kurudyi, uye kunyange kutendeuka 360 Diploma ruvara. Mumwe yakanakisisa Fe ...Read more »
Post nguva: 01-12-2018
The mannequin kuva akatsunga sezvo paminiti kunaka injini. Hongu, zviri kuenda mutengo iwe mari yakawanda, zvisinei Tikatarisa pakuvaka, uye kungoitira unhu kuvaka mukomana uyu ngozi, uri kuruboshwe kushamisika kana icho transformer pakavanda. Nyore rech ...Read more »
The Most rinonakidza Hoverboard vakadengezera Scooters 2018
Post nguva: 01-04-2018
Uyewo, yemagetsi sikuta anouya mavara mavara uye zviri Zvinogonekawo kuti vashongedze pamwe chinamirwa izvo zvinobatsira cowl ari anokwenya kuti zvabuda ose saka kakawanda. Chokwadi, chinhu mhando kuti rikurumidze iwe kuti chero kuenda kuti zvauri aiming panguva mukati hapana ...Read more »
The Electric Skateboard chichava Cool Christmas Gift muna 2018?
Post nguva: 12-22-2017
Christmas ari kuuya. Chii chiri chido chenyu mugore idzva? Uri kutsvaka inotonhorera uye mufashoni chipo shamwari dzako kana mhuri? Zvichida wakambozvibvunza anatsa dzimwe pamusoro toyi chido-mazita uye zvose-kumativi chipo chikuru pfungwa, zvino achiri haanganzwisisi munhu akakodzera chipo? Kana uri kutsvaka uko ...Read more »
Post nguva: 12-14-2017
In motokari chero yemagetsi, pane zvakawanda mhando chikuru braking- guru, kukweshera, uye rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking. Vose kushandisa nzira dzakasiyana siyana tava kuderera motokari pasi. Kukweshera Braking kukweshera mabhureki zvakafanana mhando mabhureki zvinoshandiswa pamusoro motokari kwakajairika. Zvikurukuru, kukweshera agai ...Read more »
Post nguva: 12-06-2017
Kazhinji haudi kutakura yenyu yemagetsi skateboard refu noruoko, uye dare mukwende anogona kuita nyore zvikuru kuita kudaro. Aine pabhodhi mukwende, unogona kunzwa wakasununguka kutakura bhodhi rako kushanda munguva kuchinaya mangwanani uye zvichiri atasve nayo kumba kana zviri sunnier manheru. Th ...Read more »
Good Self Kuwiriranisa sikuta With APP
Post nguva: 11-30-2017
Kune unlicensed hoverboards mazhinji imomo pa pamisika, uye uchida kuita kuti chokwadi uchava mumwe iyo yakachengeteka kuchovha iwe kana yenyu mbudzana. hoverboards izvi zvinowanikwa kubva yakatosiyana yemakambani dzakasiyana kukura uye chimiro kuti kusangana munhu chinodiwa. The ...Read more »
Electric Skateboards kungachinja pakufamba kuenda kwaaishanda yako
Post nguva: 11-03-2017
Sezvo vanhu mhenyu mureza kuramba simuka, vanhu vakawanda vanosarudza kuti pakutsvaga zvikuru mufashoni uye zvakakunakira upenyu. Kunyanya youngers, vanoda kuongorora zvimwe zvinhu zvitsva uye zvinonakidza. Saka, vane yepamusoro kudiwa pfupi-kure pakufamba Ezvemutauro. Kudivi rimwe, vanogona kunakidzwa conv ...Read more »
China Outdoors Sporting Electric Self vakadengezera Scooters
Post nguva: 10-27-2017
Nokuti izvi pachake mufambo midziyo hadzisi kwaireva kuti refu daro kufamba, zvisinei tinodzibata yakagadzirwa kuti mapfupi commutes nyore uye imwe akarongeka. Batsirai nokuti MAKARALI USB kunakidzwa mashandiro dzeserura zvakanaka uye zvakasiyana redhiyo mutambo dzakabatana. Pamwe zvinhu izvi, kuyengerera ichi ...Read more »
Post nguva: 10-19-2017
Ndicho chokwadi zvachose, kana vachiti vari dzakasiyana, pane imwe mhando saka aizivikanwa IOS pamusika kare. Izvi Scooters yemagetsi ruoko-akasununguka kana emagetsi skateboard inogona kuendeswa miriyoni nzvimbo, hazvina basa kuti iwe akavadana. Koowheel Newest VERSION Magetsi ...Read more »
The Perfect Cheap Off Road Electric Self vakadengezera sikuta
Post nguva: 10-05-2017
The Range ndechimwe zvinokosha kufunga nepo Pakusarudza motokari electrically dzinofambiswa. Self vakadengezera sikuta kuti yakaderera-nokukurumidza motokari, nomwoyo kwakafanana vashambadzirane zvakafanana. Yakataurwa Koowheel, kuti Hoverboard K7 iri patented se "maviri-vhiri, kuzvicheka-vakadengezera private car.R ...Read more »
Post nguva: 09-29-2017
Hi ~ Nokuda Koowheel 2nd chizvarwa yemagetsi skateboard Kooboard ndiye wokutanga yemagetsi skateboard muupenyu hwangu, uye ini kashoma kushandisa mari kutenga imwe chitoyi chinodhura yakadaro (Kuwedzera, akatenga kutevera bhasikoro ne "chikonzero chakanaka" ...) saka ndaida kuenda kupaki. Uye ndakanga painf chaizvo ...Read more »
Post nguva: 09-22-2017
Pamwe yemagetsi skateboard zvinopisa uye kufarira ano vechidiki, nguva yavo yakanakisisa Electric nepakati puranga vangangoramba kuita zvimwe DIY maererano pezvatinoda. Recently I uwane dzimwe inotonhorera DIY skateboard musi Instagram. Pace: A kunokurumidza E-longboard kuchabatsira ...Read more »
The Best Hoverboard Self vakadengezera sikuta 2017
Post nguva: 09-19-2017
Chikonzero kudana self BALANCInG sikuta se "Hoverboard" ndechokuti nepo akatasva, zvinoita sokunge uri dzinodzengerera anoverengeka masendimita pamusoro pasi. Yeuka kuramba kuonana pasi. Uyu rakanakisisa maviri-vhiri rwokuzvipira vakadengezera yemagetsi sikuta kuti akagadzirira kupa nzira more ...Read more »
Chikuru Holiday Trip Danho-Kooboard tonhorera upenyu
Post nguva: 09-05-2017
The "E-bhodhi" panguva iyoyo iripo pamusoro pamusika kungobva sezvimwe kufamba yakakurumbira, vemungano mapuranga. Zvino tinogona kuona kuti vanhu vakawanda vari adanane ichi yokufamba chokushandisa. Munguva ichangopfuura, mumwe China pamusoro shanu hoverboard muchiso kambani kukura 2nd chizvarwa yemagetsi longboard ...Read more »
Three zvikuru uye yakanaka nokuzvidzora BALANCInG Scooters aongorora
Post nguva: 08-23-2017
The hoverboard vari nevanhu vakawanda muduku, nokuti vanogona yawana risingaperi kufara uye vakanakidzwa pamusoro akatasva hoverboard, asi sei kusarudza ngozi nokuzviremekedza vakadengezera sikuta? Zvino regai varumbidze zvitatu zvikuru uye yakanaka nokuzvidzora BALANCInG sikuta kwamuri. Wokutanga ndiye KOOWHEEL muchiso Self Balanc ...Read more »
rwendo Iri zvose zvakatipoteredza uye chipa
Post nguva: 08-07-2017
Monday ose akasvika, nevafambi uyewo yakatsvikinyidzana mubhazi / pevhu, zvinorwadza upenyu panzira, ndinofunga mwoyo yedu akaneta, anotaurwa kuti maumbirwe, pakupedzisira akanga kunyorova ziya ari vazhinji. Kunyange ano motokari zvokushandisa zviri siyana, asi haana kusangana vanhu vose: kutyaira motokari, zvakare kumisa; Metro bhazi, ...Read more »
Musiyano pakati Koowheel k8 uye kugara 6.5inch hoverboard
Post nguva: 07-26-2017
Vari kuti vaizviita vakadengezera Scooters ngozi kushandisa?
Post nguva: 07-07-2017
Self mwero Scooters, kana anonziwo hoverboard, nokuzvidzora BALANCInG puranga, yemagetsi nepakati sikuta kuva akakurumbira zvikuru chinhu mumakore achangodarika. Kunyanya muna US uye UK, vanoda izere nedambudziko uye kufara, kuwana zvinhu anosetsa kubva muupenyu. Izvi 2 vhiri dzemagetsi Scooters kupa ...Read more »
Ndiani anoti komiyuta wako zuva nezuva havagoni kuva kunakidza?
Post nguva: 07-03-2017
Uri kuda Skateboarding asi kuzoneta zvose kuda netsoka dzenyu? Pane itsva yemagetsi skateboard kubva Koowheel China. Zvimwe unogona kuchinja nzira kutama. Zvinotevera Photo zvinotora kubudikidza htfubeck. Tinotenda kuti kugoverana naro. The Koowheel yemagetsi longboard skateboard akasikwa ane sim ...Read more »
The Mazano matatu pakanzi yemagetsi skateboard
Post nguva: 06-27-2017
Zvino vanhu vakawanda vane fashoni rwokugadzira chikumbiro apo vanoenda kufamba, ipapo yemagetsi sikuta Zvinokosha mapfekero boka yokufamba. Asi vakawanda zvigadzirwa zvitsva, vaizviona vakadengezera sikuta mutengo uri anodhura, saka tinofanira kungwarira kana isu kutenga. Tava akapfupikisa zvinhu zvitatu purc ...Read more »
Imhandoi ruzivo wemagetsi skateboard kunogona kuunza here?
Post nguva: 06-06-2017
The zvakangwara ekisitenjeni zvinovaraidza ruzivo Electric Skateboards vane tinoberekwa kutandara hunhu. Mukupera 1950s, vaigara kumaodzanyemba California Beach vemunharaunda akavaka skateboard yokutanga yenyika. Sezvo kuri kuwedzera Surfing panyika, Electric Hoverboard yave bika ...Read more »
Ndeupi navi turusi zvakakodzera here?
Post nguva: 05-19-2017
Panguva ino, muna pfupi nechokure chokufambisa, asi youngers mubayiro yakawanda pakuenzanisa sikuta, yemagetsi sikuta, yemagetsi sikuta uye yemagetsi skateboard Mhando ina idzi. Ravaigona features, mukuwedzera kune yemagetsi, chinonyanya kukosha ndechokuti portability uye zvimwe zvitsva features, sezvo W ...Read more »
Nei E-skateboard saka inopisa uye kufarira vechiduku?
Post nguva: 05-11-2017
Electric Skateboard azere kunonakidza uye chinova chitandadzo muduku pemarudzi mazhinji. Munguva ichangopfuura, vasikana kunyanya vazhinji vanotanga kubatana mune chikwata ichi. Zvisinei, kuti skateboard vasikana avo vanoshandisa haasi chetsika mumwe, asi KOOWHEEL D3M hunyambiri Motors Magetsi skateboard. skateboard kwakadaro muridzi wakanaka appearan ...Read more »
Sei pamusoro vakachengeteka nokuti mukuru akatasva yemagetsi sikuta?
Post nguva: 04-17-2017
Zvino yemagetsi Scooters yazova nevakawanda sarudzo kuti yokufaranuka uye kugwinya. The vechidiki vakatasva yemagetsi nepakati sikuta, anogona kushandisa pachiyero uye dzepanguva mano, uye anogona kusimudzira kukura cerebellum uye pave pfungwa kukura, chiwedzere Moyo riparadzirwe. ...Read more »
Electric Chiyero sikuta - Ratidzai hwako fashoni upenyu
Post nguva: 04-05-2017
Traffic jamhu idambudziko guru muguta, ayo zvakaoma chaizvo yokutsvaka yokupaka nzvimbo, saka "kuzara" rava inonyanya chipauro vanhu vanogara muguta. Saka, muna guru ichi, yemagetsi hoverboard kuti kufamba kuve nyore, kunyanya muzhizha uye muchando, ...Read more »